Amar deg deg ah oo lagu so rogay Darawalada Mooto Bajaajta ee magaalada Dhuusamareeb - Awdinle Online
Amar deg deg ah oo lagu so rogay Darawalada Mooto Bajaajta ee magaalada Dhuusamareeb
Laamaha Ammaanka ee Magaalada Dhuusamareeb Caasimadda Dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku amray Darawalada Gaadiidka Mooto Bajaajka in aysan Shaqeyn karin habeenkii wixii ka dambeeya 9: 00 Fiidnimo ama Saddex Saac.
Amarkaan oo la faray dhamaan Darawalada Mooto bajaajta ayaa xalay sirasmi ah uga dhaqan galay magaalada Dhuusamareeb, hayeeshee waxaa uu saameyn adag ku yeeshay bajaajleyda iyo dadka Shaqooyinka ku daaha ee adeegsan jiray xiliyada dambe ee habeenkii.
Laaamaha amniga ayaa waxaa ay ku sheegeen Amarkaan in ay tahay mid lagu xaqiijinayo Amniga guud ee magaalada Dhuusamareeb, isla markaana qofkii aan qaadan amarka ay tallaabo ka qaadi doonaan.
Waa degmadii labaad oo ka tirsan degaannada Galmudug oo uu ka dhaqan galo Amarka ah in Mooto Bajaajta aysan Shaqeyn karin habeenkii wixii ka dambeeya 9:00 Fiidnimo ama Saddex Saac.
.Todobaadyadii la soo dhaafay ayaa waxaa degaano ka tirsan Galmudug ka dhacay falal amni darro, waxaana 9-kii Bishaan duleedka Balanballe lagu dilay Saraakiil ka tirsan Ciidamada Millateriga halka qarax ka dhacay Gaalkacyo 18-kii Bishaan ay ku dhinteen Saraakiil muhiim ah oo ka tirsanaa Ciidamada dowladda Soomaaliya.
Previous articleXildhibaan Mahad Salaad oo Su’aal ka keenay Ciidamada dowladda shalay geysay Gedo
Next articleMaxkamadda G/Banaadir oo loo gudbinayo dacwad ka dhan ah Hay’adda SAHAN RESEARCH